इराकमा दोलखाकी यी नेपाली चेली सिकिस्त बिरामी: आफन्त पत्ता नलागेको हुदा सक्दो शेयर गरिदिनु होला ! – ताजा समाचार
इराकमा दोलखाकी यी नेपाली चेली सिकिस्त बिरामी: आफन्त पत्ता नलागेको हुदा सक्दो शेयर गरिदिनु होला !
रोजगारी नेपालको प्रमुख समस्या हो। त्यसैले विदेसिने युवाको लर्को अनन्त छ। गाउँघरमा विदेश जानु सँस्कृति बनिसकेको छ। युवाहरुमा सानोतिनो काममा आँखा नलगाउने, बरु खाडी मुलुकमा चर्को घाम सहेर पसिना बगाउन तयार हुनेहरुको संख्या बढ्दै छ। अझ राम्रो तलब, सजिलो र काम र गतिलो देश भए त झनै गज्जब!
देशमा उद्योग, कलकारखानाको कमी हुनु, भएको पनि पनि राम्रोसँग नचल्नु, राजनीतिमा अस्थिरता, स्रोत तथा साधनको उपयोग नहुनुजस्ता विविध कारणले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। अध्ययनका लागि होस् वा कामका लागि विदेश जाने धेरै छन्।
युवा विदेशिनुको पीडा पनि देशले भोगिरहेको छ। गाउँघरमा खेतबारी बाँझो रहन थालेको छ। रेमिट्यान्स छ बढेको छ, तर त्यससँगै पारिवारिक विघटनजस्ता समस्या थपिएका छन्। विदेश जाने क्रममा हुने ठगी, विदेशमा कामको बोझ, तनाव र आत्महत्यासम्मका घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ।
ईराकमा अहिले दोलखाका एक नेपाली चेली बेहोस भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी छिन । उनि दोलखा कहाँ कुन गाउमा भनेर कुनै पत्तो छैन । उनको परिवारसंग सम्पर्क नभएको कारण अहिले उनि सिकिस्त रहेको खबर आएको छ ।
हेर्नुस यो भिडियो :